Maitiro ekuisa Safari paApple TV | IPhone nhau
Maitiro ekuisa Safari pane Apple TV
Imwe yekusavapo kukuru kweiyo nyowani Apple TV hapana mubvunzo kuti Safari. Iyo webhu bhurawuza yeIOS uye OS X ndeimwe yemashandisirwo ayo anofanirwa kuve mumaonero evazhinji padesktop yeiyo Apple TV, asi zvinoita sekunge parizvino Apple haione seyakakodzera, Muchokwadi haisi iyo haina kusanganisira Safari, asi haigamuchire chero mhando yekushandisa iyo inosanganisira webhu browser, kana maapplication anotendera kuvhura mawebhu link. Asi hapana chinogona kudzivisa vabeki uye Ivo vatowana Safari kuti vashande paApple TV nyowani uye vanotsanangura maitiro ekuzviita. Tinokupa zvese zvese pazasi.
1 Bvisa kusawirirana
2 Kuvaka iyo Safari app yeApple TV
3 Kufamba neSiri Remote
Iyo Apple TV yakagadzirira kushandisa webhu bhurawuza, asi Apple yakaremara uye saka inogona kuonekwa muXcode. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kubvisa kusapindirana uku, kwatinofanira kugadzirisa mitsara yakati yefaira «kuwanikwa.h» Iyi faira inogona kuwanikwa mukati «Xcode.app», iyo yaunofanirwa kurudyi kubaya pane iro faira uye tinya pa «Ratidza zvirimo zvepakeji». Isu tinoenda kunzira inotevera:
"Zviri mukati / Musimudziri / Mapuratifomu / AppleTVOS.platform / Musimudziri / SDKs / AppleTVOS.sdk / usr / inosanganisira"
Mukati meiyo nzira isu tinovhura iyo faira «kuwanikwa.h» neXcode uye tinotsvaga inotevera mitsara:
# tsanangura __TVOS_UNAVAILABLE __OS_AVAILABILITY (tvos, haiwanikwe)
# tsanangura __TVOS_PROHIBITED __OS_AVAILABILITY (tvos, isipo)
Uye tinovatsiva nemitsara inotevera:
# tsanangura __TVOS_UNAVAILABLE_NOTQUITE __OS_AVAILABILITY (tvos, haiwanikwe)
# tsanangura __TVOS_PROHIBITED_NOTQUITE __OS_AVAILABILITY (tvos, isipo)
Isu tinochengeta iyo faira uye isu tave kugona kuvaka chikumbiro chedu muXcode.
Kuvaka iyo Safari app yeApple TV
Isu tinofanirwa kushandisa iyo GitHub chirongwa kubva Iyi link. Maitiro acho akafanana neaya ekushandisa «provenance» iyo yatinotsanangudza mukati ichi chinyorwa uye muvhidhiyo inotevera:
Kana tangoisa iko kunyorera pane yedu Apple TV, tinogona kuishandisa kushanyira edu epamhepo mapeji.
Kufamba neSiri Remote
Bhurawuza racho rakasarudzika asi rinokutendera kuti utarise pamapeji edu ewebhu pasina matambudziko. Tichishandisa iyo trackpad yekutonga isu tinogona kupururudza nekufamba kuburikidza newebhu peji. Iyi ndiyo mirairo yekushandisa Siri Remote neichi webhu browser.
Dhinda trackpad kuti uchinjane pakati pe scroll mode uye cursor mode
Slide munwe wako pa trackpad kuti upururure kana kufambisa iyo cursor
Dhinda Menyu kuti udzokere
Dhinda Play kuti uise kero yekufamba uchienda
Sezvineiwo, Apple yaizowedzera Safari kune yako Apple TV uye titendere isu kushandisa Siri kuenda kune edu aunofarira mapeji kana kuraira peji ratinoda kuenda pane kuti tishandise iyo tvOS keyboard. Asi ikozvino ndiyo imwe nzira inogona kushandira vazhinji vevaridzi veApple TV.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekuisa Safari pane Apple TV
Ngatione kana chinhu chimwe chete icho chabuda asi kuna mame
Iyi Provenance yatinotsanangudzawo pane iyo blog.
Haikwanisi kugadzirisa kuwanikwa kwefaira.h .... hapana mvumo yemuridzi .. Ini ndachinja mvumo uye hapana nzira
Mhoroi, chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri, kusvikira ndaona vhidhiyo iyi….https://youtu.be/gLqa5_gPYTQ , mune zvazvinoita kutevedzera folda inowanikwa.h uye unamate pane desktop uye kamwe pane desktop kana ichikurega uchinje…. ipapo izvo zvaunofanirwa kuita kana iwe uchinge wagadzirisa, kuteedzera nekunamatira kumashure kune yako saiti, uchipa iyo kutsiva uye ndizvozvo ... Ndinovimba zvinokubatsira
Iyi dzidziso inobatsira kune Apple TV 3rd. Chizvarwa ?????
Kana ndezve 2 chete ne1 chete ????
Ndinovimba munogona kunditsigira
Izvozvi zvave kugona kufamba neSafari pane iyo nyowani Apple TV
Iwo akanakisa mahedhifoni eBluetooth kune yako Apple TV